သံသယများလွန်းတဲ့RS Life ကသင့်အတွက် Dangerous ပါပဲ… – Trend.com.mm
အတွဲတိုင်းမှာ ရှိကိုရှိတတ်တဲ့ပြဿနာကတော့ သံသယ၀င် သ၀န်တိုပြီး မယုံမကြည်ဖြစ်တတ်ကြတာပါပဲ …ဒီကိစ္စကြီးကသိပ်ကိုဆိုးဝါးလွန်းပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲချစ်တယ်လို့ဆိုပါတဲ့အတွဲတွေတောင်ဒီလိုအယုံကြည်မရှိခဲ့လို့ပျက်စီးခဲ့ရတာတွေများကြီးရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မလိုအပ်တဲ့သံသယတွေမထားပါနဲ့။ အမြင်ပေါ်အများကြီးမူတည်ပါတယ်။သူ့အပေါ်မှာ ကိုယ်ကအကောင်းဆိုတာ မမြင်ပေးနိုင်သ၍သူ့ရဲ့အပြုမူတိုင်းဟာသံသယ၀င်စရာကောင်းနေမှာပါ။ချစ်သူရည်းစားကြား ယုံကြည်မှုတွေပယ်ပျောက်ပြီး နားလည်မှုလွဲကာ သံသယတွေများလာတဲ့အခါ သံသယ၀င်တဲ့သူအဖို့လည်းစိတ်ပင်ပန်းရပါတယ်၊ ဒေါသစိတ်တွေ မောဟစိတွေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရသလို မလုပ်ပဲနဲ့အထင်ခံရတဲ့သူအဖို့ကလည်းစိတ်ထဲသိမ်ငယ်လာကာ ငါဘာလုပ်လုပ်သူ့အတွက်အပိုပဲ ငါကတကယ်ကို သူ့အတွက်အသုံးမ၀င်အရေးမပါတာပါပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေဝင်လာတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်မကောင်းတဲ့သံသယစိတ်မျိုးမထားပဲ ကိုယ်သိချင်တာ ကို ကိုယ်တိုင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးပြီးတစ်ဦးရဲ့စိတ်သဘောထားကိုတစ်ဦးနားလည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်ဆောင်ရင်ရပါပြီ။နောက်တစ်ခုက သိပ်ပြီးသံသယတွေမလိုပဲထားတဲ့အခါ အမှန်တိုင်းပြောချင်တာတွေရင်ဖွင့်ချင်တာတွေရှိတာတောင် စိတ်တိုမှာဆိုးလို့သံသယ၀င်မှာဆိုးလို့ဆိုပြီး လျို့ဝှက်ထားရင်ကနေမလိုအပ်ပဲပြဿနာသေးသေးလေးတွေကနေ အကြီကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့နားလည်မှုရှိအောင်နေဖို့ကအဓိကပါပဲ…ဒါဆိုရင်သံသယတွေ စိတ်ဒဏ်ရာရစရာတွေသိမ်ငယ်စရာကိစ္စတွေဆိုတာရှိလာတော့မှာတောင်မဟုတ်ပါဘူး….
အတှဲတိုငျးမှာ ရှိကိုရှိတတျတဲ့ပွဿနာကတော့ သံသယဝငျ သဝနျတိုပွီး မယုံမကွညျဖွဈတတျကွတာပါပဲ …ဒီကိစ်စကွီးကသိပျကိုဆိုးဝါးလှနျးပါတယျ။ ဘယျလောကျပဲခဈြတယျလို့ဆိုပါတဲ့အတှဲတှတေောငျဒီလိုအယုံကွညျမရှိခဲ့လို့ပကျြစီးခဲ့ရတာတှမြေားကွီးရှိနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျရှေးခယျြထားတဲ့ကိုယျ့ခဈြသူအပျေါမလိုအပျတဲ့သံသယတှမေထားပါနဲ့။ အမွငျပျေါအမြားကွီးမူတညျပါတယျ။သူ့အပျေါမှာ ကိုယျကအကောငျးဆိုတာ မမွငျပေးနိုငျသ၍သူ့ရဲ့အပွုမူတိုငျးဟာသံသယဝငျစရာကောငျးနမှောပါ။ခဈြသူရညျးစားကွား ယုံကွညျမှုတှပေယျပြောကျပွီး နားလညျမှုလှဲကာ သံသယတှမြေားလာတဲ့အခါ သံသယဝငျတဲ့သူအဖို့လညျးစိတျပငျပနျးရပါတယျ၊ ဒေါသစိတျတှေ မောဟစိတှနေဲ့စိတျပငျပနျးရသလို မလုပျပဲနဲ့အထငျခံရတဲ့သူအဖို့ကလညျးစိတျထဲသိမျငယျလာကာ ငါဘာလုပျလုပျသူ့အတှကျအပိုပဲ ငါကတကယျကို သူ့အတှကျအသုံးမဝငျအရေးမပါတာပါပဲဆိုတဲ့စိတျမြိုးတှဝေငျလာတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုနှဈဦးနှဈဖကျလုံးအတှကျမကောငျးတဲ့သံသယစိတျမြိုးမထားပဲ ကိုယျသိခငျြတာ ကို ကိုယျတိုငျပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးမေးပွီးတဈဦးရဲ့စိတျသဘောထားကိုတဈဦးနားလညျသဘောပေါကျအောငျလုပျဆောငျရငျရပါပွီ။
နောကျတဈခုက သိပျပွီးသံသယတှမေလိုပဲထားတဲ့အခါ အမှနျတိုငျးပွောခငျြတာတှရေငျဖှငျ့ခငျြတာတှရှေိတာတောငျ စိတျတိုမှာဆိုးလို့သံသယဝငျမှာဆိုးလို့ဆိုပွီး လြို့ဝှကျထားရငျကနမေလိုအပျပဲပွဿနာသေးသေးလေးတှကေနေ အကွီကွီးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ဒါကွောငျ့တဈယောကျပျေါတဈယောကျပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့နားလညျမှုရှိအောငျနဖေို့ကအဓိကပါပဲ…ဒါဆိုရငျသံသယတှေ စိတျဒဏျရာရစရာတှသေိမျငယျစရာကိစ်စတှဆေိုတာရှိလာတော့မှာတောငျမဟုတျပါဘူး….
သင့်ခြေ ထောက်လေးကို လည်းချစ်ပေးပါ…